Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Strasbourg - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Strasbourg (Jarmal: Straßburg, Alsatian: Strossburi) waa caasimadda gobolka Grand-Est ee Faransiiska waxaana aad loogu yaqaanaa martigelinta dhowr hay’adood oo Yurub muhiim ah. Waxa kale oo ay caan ku tahay Xarunta taariikhiga ah ee quruxda badan - Grande Île - oo ahayd xaruntii ugu horreysay ee magaalada ee UNESCO u aqoonsatay UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka.
Strasbourg waa mid ka mid ah sagaalka magaalo ee ugu waaweyn faransiiska iyada oo ku dhowaad nus malyuun qof ay ku noolyihiin magaalooyin waaweyn oo ku teedsan wabiga oo dhan ilaa magaalada Jarmalka ee Kehl, oo ku taal daanta bari ee Rhine.
Magaaladu waa xarunta Golaha Yurub, Maxkamadda Yurub ee Xuquuqda Aadanaha, Ombudsman-ka Yurub, Eurocorps, European Audiovisual Observatory iyo, ugu caansan, Baarlamaanka Yurub, oo sidoo kale fadhiyo ku leh Brussels.
Strasbourg waa meel loo dalxiis tago oo caan ah ugu horreyntii waxaa u mahadceliyay Xarunta quruxda badan ee la ilaaliyo oo dadka lugeynaya, taas oo lagu baari karo lug ama baaskiil maalmo yar gudahood. Ha iloobin in rafcaanka Strasbourg uu hadda dalxiisayaasha u keeno magaalada sannadka oo dhan, oo leh kooxo dalxiis oo waaweyn gaar ahaan kuwa soo noqnoqda inta lagu jiro bilaha xagaaga iyo inta lagu jiro suuqa jiilaalka ee sannadlaha ah.
Xafiiska Dalxiiska ee ugu weyn, Place de la Cathédrale. 09:00 ilaa 19:00. Haddii aad weydiiso inay khariidado haystaan ​​waxay isku dayayaan inay mid kaa iibiyaan 1,50 EUR - hubi inaad weydiiso haddii ay leeyihiin khariidado bilaash ah, waxa aad markaa hesho ka dib asal ahaan waxay la mid yihiin midka la bixiyay. Waxay sidoo kale iibiyaan safarro isdaba-joog ah oo isdaba socda oo dhex mara magaalada (Da'da Dhexe, Renaissance, Modern and Contemporary) midkiiba € 1, waxayna diyaarin karaan safarro baaskiil oo dhex mara Faubourgs (xaafadaha Neudorf iyo Neuhof). (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Xafiis yar oo dalxiis (heerka wadadda tareenka). 09:00 ilaa 19:00. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
In kasta oo ay suuragal tahay in la helo dad wadahadal kula yeelanaya buugga weedhaha Jarmalka, lingua franca ee Strasbourg (iyo dhammaan Alsace) waa buugga weedhaha Faransiiska. Waa suurtagal in la maqlo Jarmal oo looga hadlayo waddooyinka, gaar ahaan agagaarka Cathedral. Alsatian (luuqada taariikhiga ah ee jarmalka ee Alsace) waa luuqad hoos udhacaysa, oo inta badan ay kuhadlaan dadka waawayn ee kunool gobolka ama meelaha miyiga ah laakiin dadaalada ayaa socda si loo soo nooleeyo.
Strasbourg waxay leedahay garoon diyaaradeed oo u gaar ah, hase yeeshe waxaa jira (qiyaas ahaan) garoomo diyaaradeed oo u dhow meelo kala duwan:
Madaarka Caalamiga ah ee Strasbourg (waxay ku taal koonfurta-galbeed ee magaalada Entzheim). iyadoo ay la socdaan duulimaadyo caalami ah iyo kuwo caalami ah. Air France waa maamulaha guud. Waxaa jira duulimaadyo aada London (Luton iyo Stansted), Madrid – Barajas Airport, Brussels iyo Schiphol Airport iyo kuwa kale. Tareenku wuxuu ku socdaa bartamaha magaalada (€ 4, oo ay ku jiraan isku xirnaanta taraamka, wuxuu soconayaa 90 daqiiqo. Haddii aad u baahan tahay oo keliya inaad tagto xarunta dhexe, tikitkaaga ka soo iibso mashiinnada hoolka imaatinka laakiin tooska ah meesha tareenka laga raaco tigidhka wuxuu ku kacayaa 2.30 9). Waqtiga safarku waa 15 daqiiqo inta jeerna waa XNUMX daqiiqo.
Basel-Mulhouse-Freiburg Airport. Waxay ku taalaa France, laakiin si wada jir ah ayey u shaqeeyaan France iyo Switzerland: waxaa jira isku xira bas gaaban oo taga saldhiga tareenka ee Saint-Louis, kaas oo hal saac iyo labaatan daqiiqo tareen ah, laga bilaabo xarunta tareenka ee Strasbourg. Shirkadaha qiimaha jaban waxay bixiyaan duulimaadyo ka yimaada iyo dhowr dal oo kale oo Yurub ah, duulimaadyo aada London (Heathrow, Luton, Stansted iyo Gatwick), Paris Charles de Gaulle Airport, Berlin, Frankfurt iyo Istanbul (Sabiha Gökçen). EuroAirport waxay u adeegtaa saldhig u ah EasyJet Switzerland, sidaa darteed waxaa jira duullimaadyo badan oo EasyJet ah oo loo tago meelaha dalxiisyada Yurub.
Madaarka Karlsruhe / Baden-Baden. Waxay ku taal meel u jirta 60 km (37 mi) jarmalka. Waxaa jira duulimaadyo aada Berlin, London (Stansted), Warsaw (Modlin), Belgrade iyo Budapest. Ryanair wuxuu ka shaqeeyaa Karlsruhe kadib xukun maxkamadeed oo ku dhawaaqay diyaarinta kabkeeda garoonka diyaaradaha Strasbourg xadgudub ku ah sharciga Yurub. Habka ugu wanaagsan ee lagu tago Strasbourg waa bas laga raaco garoonka diyaaradaha ilaa Baden-Baden Hauptbahnhof (Saldhigga Weyn); halkan laga bilaabo tareenadu waxay u socdaan Strasbourg, caadi ahaan hal isbeddel. Saldhig ilaa saldhig safarku wuxuu ku saabsan yahay 45m-1hr. Eeg jadwalka baska tooska ah ee ka baxa garoonka diyaaradaha ee tagaya Strasbourg, tani waxay ku xiran tahay la kulanka duulimaadyada Ryanair ee London. Flibco waxay basaska uga shaqeysaa garoonka diyaaradaha ilaa Strasbourg.
Madaarka Caalamiga ah ee Frankfurt. Qiyaastii seddex saacadood ayaa u jirta Strasbourg ee Jarmalka, waana mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ugu dhow Strasbourg. Lufthansa waxay ka shaqeysaa baska Express Bus ee u dhexeeya Strasbourg iyo Frankfurt, Germany (laakiin isku xirka tareenka aan tooska aheyn wuu ka jaban yahay haddii horay loogu sii qoro khadka tooska ah, isagoo isku xiraya labada Karlsruhe ama Offenburg) Basku wuxuu qaadanayaa 2½ saacadood wuxuuna ku kacayaa € 49 (hal wado). Boos celintu waxay lagama maarmaan u tahay Basaska [Lufthansa] Xawaaraha / min Strasbourg.
Sababtoo ah isku xirnaanta tareenka ee aad u wanaagsan Paris, waxay macno samayn kartaa inaad u duusho Paris Charles de Gaulle Airport oo aad ka qaadatid TGV halkaas. Air France iyo qaar ka mid ah la-hawlgalayaasheeda waxay bixiyaan tigidhada isku dhafan ee isbahaysiga tareenka hawada.
Muuqaalka Gare de Strasbourg ee dibedda
Strasbourg waxaa si fiican ugu adeega adeegyo tareen heer gobol, heer qaran iyo caalami ah, inta badanna waxaa leh SNCF (Tareenka Faransiiska), laakiin sidoo kale Deutsche Bahn (Tareenka Jarmalka).
Strasbourg waa dhamaadka bari ee qad tareen xawaare sare leh sidaasna waxaa ku adeegta TGV badan iyo tareenada ICE qaarkood, badankooduna waxay usii socdaan Paris iyo Jarmalka siday u kala horreeyaan. Nasiib darrose tani waxay sidoo kale dhalisay dhammaadkii tareenno badan oo hurdo-dheer soconaya sida Orient Express-kii asalka ahaa.
Meelaha waawayn ee la tago waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee soo socda iyo magaalooyinka leh dhoofyo maalinle ah oo fara badan. Waqtiyada safarku waa qiyaas, qaar waxay u baahan yihiin tareenada TGV: Paris 1h 50m, Dijon 2h, Lyon 3h 40m, Metz 1h 15m, Nancy 50m, Marseille 5hr 30m, Besançon 1hr 40m, Luxembourg 1hrs 40m, Mulhouse 50m, Basel 1h 25m, Frankfurt 1h 45m , Stuttgart 1h 20m, Munich 3h 40m, Saarbrücken 1h 30m tareen toos ah oo toos ah, Brussels 3h 40m.
TGV Est Européen waxay adeegyo toos ah u fidisaa: Paris Charles de Gaulle Airport 2h 25m, Lille 3h 20m (isku xirka saldhigga ee isku xidha Eurostar iyo London), Rennes 5h 15m, Nantes 5h 10m, Bordeaux 6h 45m.
Laga soo bilaabo Saarbrücken, tigidhka Saar-Elsass waxaa laga iibsan karaa € 35 maalmaha fasaxa ee usbuuca dhammaadka kaas oo awood u siinaya safar-wareega illaa 5 qof oo safar ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa halkan.
Saldhigga tareenka ee ugu weyn Strasbourg waa Gare de Strasbourg, 20 Place de la gare. . Saldhigga, oo si qurux badan loogu cusboonaysiiyay wejiga hore ee muraayadda muraayadda, wuxuu ku yaal meel gaaban oo galbeed ka xigta bartamaha magaalada oo ku taal Place de la Gare. Waxaa jira xiriirro nidaamka taraamka iyo basaska, iyadoo tagaasida badan ay bannaanka ku sugeyso (dhanka bidix ee saldhiga hore ee saldhigga).
Faahfaahinta dhammaan adeegyada, iyo si aad u sii qabsato, la xiriir SNCF. Safarka gobolada, hubi SNCF TER Alsace oo isku dubbarida isku xirka hufnaanta iyo adeegga tareenka gobollada ee adeegga wanaagsan. Markaad qorsheyneyso safarada bariga Strasbourg ee Jarmalka ama wadamada ka sii baxsan, waxaad badbaadin kartaa lacag adigoo isbarbar dhigaya qiimaha ay bixiso Deutsche Bahn iyo kuwa SNCF.
Eurolines waxay siisaa adeegyo basas magaalada ah. Adeegyadu waxay ka wacaan joogsiga baska cusub ee ku yaal iridda laga galo xarunta, dhowr mitir u jirta istaanka taraamka Etoile-Bourse.
Deinbus.de waxay u adeegtaa Strasbourg marinkeeda ka imanaya Konstanz ilaa Trier.
Flixbus ilaa iyo haatan waa ciyaaryahanka ugu weyn suuqa Jarmalka waana ciyaaryahan weyn oo ka ciyaara suuqa Faransiiska sidoo kale.
Xarunta basaska, Parc de l'Étoile. Meesha laga dajiyo ee ALSA, Eurolines, Flixbus, Ouibus. Helitaanka halkaa: qaado A, D taraamyada. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Magaalada Jarmalka ee Kehl oo xadka ka baxsan ayaa xiriir la leh shabakadda taraamka Strasbourg sannadka 2017. Waa mid ka mid ah meelaha faro ku tiriska ah ee adduunka oo dhan oo aad uga boodo adeegga tareenka magaalooyinka oo kuu oggolaado inuu kaa qaado xadka caalamiga ah. Labada dhinacba waxay ku sugan yihiin aagga Schengen, uma baahnid inaad baasaboor qaadato ama aad ka jawaabto su'aasha ah “ganacsi ama raaxo” waxaana laga yaabaa inaanay ku weydiin doonin wakiilada kastamku inta boosh ee aad sidato, sidoo kale (oo xadka waa aad deeqsi heer kastaba). Waxaa jira dabcan kormeerayaasha qiimaha, markaa ha ilaawin inaad tikidh hesho.
Waxaad ku gaari kartaa Strasbourg wadooyin waaweyn oo kala duwan:
ka imanaya galbeedka (Paris, Benelux) oo qaadaya wadada weyn ee A4 (E25). Qiyaastii 4 saacadood oo ka timid Paris iyo 2 saacadood 15 daqiiqo oo ka socota Luxembourg.
ka imanaya koonfurta (Switzerland, Lyon), qaadashada wadada weyn ee A35 (E25). Qiyaastii 5 saacadood oo ka socota Lyon
ka imanaya waqooyiga iyo bariga (Jarmalka), oo qaadaya waddada weyn ee A5 (E35).
Ku wadista magaalada Strasbourg jirkeedii waa iska fududahay in kastoo ay jiraan wadooyin yar oo ka mamnuuca baabuurta. Waxaa jira garaashyo badan oo waaweyn oo ku hareeraysan magaaladii hore haddii hudheelkaagu aanu lahayn meel baabuurta la dhigto oo u gaar ah. Gawaarida qaarkood way ka qaalisan yihiin kuwa kale, gaar ahaan joogitaanada dhaadheer. Midka Petite France Ste Marguerite waa kan ugu raqiisan € 7.20 / 24 saac iyo 5.20 XNUMX maalin kasta oo isku xigta.
Tigidhada P + R (baarkinka maalinta oo lagu daro qiimaha soo celinta taraamka ilaa 7 rakaab ah oo gaariga ah): € 3.20, P + R Rotonde: € 3.70.
Strasbourg ayaa sida ugu sahlan sahaminta lugta, iyo Xarunta taariikhiga ah ee magaalada si sahal ah ayaa loo sahamin karaa maalin ama laba maalmood gudahood. Si aad u awooddo inaad daboosho dhul badan, waa inaad tixgelisaa inaad kireysato baaskiil ama aad isticmaasho shabakadda gaadiidka dadweynaha.
Strasbourg waxay ku habboon tahay baaskiil wadista - bartamaha magaaladuna waa fidsan tahay waxaana jira waddooyin badan oo baaskiil ah iyo jidad baaskiil. Waad kireysan kartaa baaskiil:
otomaatigga ama saldhigyada wadaagga baaskiilka ee vélhop.
rue du Maire Kuss, xarunta tareenka hortiisa
rue des Bouchers, dhinaca koonfureed ee wabiga Ill, oo u dhow rue d'Austerlitz iyo Porte de l'Hôpital xarunta tareenka.
Baaskiiladaha ayaa loo oggol yahay taraamyada marka laga reebo saacadaha ugu sarreeya
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan baaskiil wadista Strasbourg waxaa laga heli karaa bogga Strasbourg.
Tram ee Strasbourg
Basaska iyo taraamyada Strasbourg waxaa ka shaqeeya Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS). Dhowr iyo toban khadad bas oo nambar leh iyo lix saf oo taraam ah (oo loo yaqaan A ilaa F) ayaa u adeega magaalada. Nidaam hal tikidh ah ayaa daboolaya baska iyo taraamka. Tigidhada waxaa lagu iibiyaa 'tabacs' (newsagents), xafiisyada dalxiiska, CTS boutiques ama mashiinada wax lagu iibiyo ee taraamka lagu istaago. Tigidhada waa in lagu ansaxiyaa ka hor inta aan la adeegsan, mashiinada ku yaal meelaha taraamka laga raaco ama mashiinka uu ku wado darawalka markaad baska raaceyso.
Soo-koobidda qiimaha (laga bilaabo Oktoobar 2018):
Xasaasiyad fudud (hal waddo) € 1.80 (€ 2 dusha sare)
Jidka Aller (safarka wareega) € 3.50
10 x Aller Simple (1 tikidh aan xiriir lahayn oo ku habboon hal qof kaliya) € 14.10
24H Individuel (tigidhka 24hr ee hal qof) € 4.50
Trio (tikit hal maalin ah ilaa saddex qof) € 6.90
Qiimayaasha waxyar baa ka hooseeya (tusaale € 1.70 hal dhinac) haddii lagu rakibo kaarka Badgéo, CTS App ama kor loogu qaado tikidhka aan lala xiriirin karin. CTS App wuxuu ku shaqeeyaa kaliya kaararka Faransiiska ee Sim (laga bilaabo Oktoobar 2018).
Haddii aad wax badan u isticmaaleyso basaska iyo / ama taraamyada, tikidhada Europass waxaa laga heli karaa dhammaan mashiinnada tikidhada otomaatigga ah 24 saacadood ama toddobo maalmood. Europass Mini wuxuu ku shaqeynayaa dhamaan taraamyada maxalliga ah, basaska iyo adeegyada tareenka, oo ay ku jiraan kuwa ka gudbaya xadka Kehl. Tigidhka Europass oo buuxa ayaa sidoo kale daboolaya gaadiidka maxalliga ah ee Ortenau Tarifverbund ee Jarmalka oo ay ku jiraan Offenburg (macluumaadka ku qoran Jarmalka oo keliya).
Xarumihii hore ee Dekedda ee Rhine ee Strasbourg
Cathédrale Notre Dame. Waxaa la dhisay intii u dhaxeysay 1176 iyo 1439 iyo munaarad 142-m ah (oo ah tan ugu sareysa cathedral ee Faransiiska), kaniisada Gothic waa shaki la'aan Strasbourg dhismeheeda ugu fiican. Fiiri ah saacadda xiddigiska gudaha cathedral-ka. Galitaan bilaash ah (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Musée de l'Oeuvre Notre Dame - Qarniyadii Dhexe iyo Renaissance Art, meel du Château. Matxaf qurux badan oo farshaxan diimeed qadiimiga ah oo la xidhiidha cathedral. .6.5 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Maison Kammerzell (Guriga Kammerzell) (bidix dhinaca hore ee cathedral-ka). Farsamooyinka si qaabaysan loo xardhay oo looxyo ah oo lagu qurxinayo dabaqyada sare waxay taariikhdu ahayd 1589. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Palais des Rohan. Qasrigii Faransiiska u ekaa, oo la dhisay ka dib markii Faransiisku la wareegay magaaladii (1681). Hoyga Matxafka Farshaxanka Farshaxanka, Matxafka Qadiimiga ah iyo Matxafka Farshaxanka Farshaxanka. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Musée Alsacien (Matxafka Alsatian), 23-25, Quai Saint-Nicolas (oo wabiga ka durugsan Ancienne Douane),. M, WF duhurkii-6galabnimo, Sabti ilaa Axad 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo. Matxafkan waxaa ku jira maqaallo laga soo qaaday nolol maalmeedka dadka Alsatian laga soo bilaabo qarniyadii 13aad ilaa 19aad: dharka, qalabka guryaha, qalabka carruurtu ku ciyaaraan, qalabka farsamada yaqaannada iyo beeraleyda, iyo walxaha diimeed ee loo adeegsado cibaadooyinka, Yuhuudda, iyo xitaa jaahilka. Bandhigyadu waxay ku jiraan qolal ay ku xiran yihiin jaranjarooyin alwaax ah iyo balakoonno ku yaal dhismayaal dabaqyo kala duwan oo ku teedsan xilliyadii Renaissance. Gelitaanka € 6.5. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Guryo ku yaal aagga "Petite France"
Petite France waa magac loo bixiyo aagga yar ee u dhexeeya webiyada, koonfurta Grande Île. Waxay hoy u tahay qaar ka mid ah waddooyinka Strasbourg ee ugu qurxoon uguna sawirada badan iyo dhismayaasha, iyada oo guryaha nus ka kooban alwaaxda ay ku tiirsan yihiin waddooyinka isku xiran ee cariiri ah. Petite France waxay u egtahay Colmar (magaalo saacad dhanka koonfureed ka xigta), oo leh kanaal qurux badan iyo guryo alwaax ah.
Degmo Yurub ah
Isticmaal Khadadka basaska # 6, 30, 72 si aad u hesho.
Golaha kursiga Yurub (Le Palais de l'Europe). waxaa dhisay 1977 Henry Bernard. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Maxkamadda Yurub ee Xuquuqda Aadanaha. Waxaa dhistay 1995 Richard Rogers (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Baarlamaanka Yurub. Waxaa la dhisay 1999 Studio Architecture. Baarlamaanku wuxuu u muuqdaa inuu ku sii kulmayo Brussels wax badan oo la qorsheeyo baarlamaanka la wareegaya dukaanka u dhexeeya Brussels iyo Strasbourg dhowr jeer sanadkiiba waxaa lagu dhaleeceeyay inay tahay lacag lumis ah kuwa ka shakisan EU iyo penny-pinchers. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Meel kale oo ku taal Strasbourg
Baaskiilka Barlamaanka Yurub
Parc de l'Orangerie. Xadiiqad qurux badan oo heer sare ah. Waxay leedahay xero xayawaan yar oo bilaash ah oo ka kooban shimbiro iyo xayawaano kale oo yar. Sidoo kale waxay leedahay garoon aad u wanaagsan oo loogu talagalay carruurta yaryar. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Kaydka. Magaalada Beerta ah oo la dhisay horraantii qarnigii 20aad koonfur-bari ee Neuhof (qaybta koonfureed ee magaalada). Isticmaal khadka baska # 24 si aad u hesho. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xarunta Telefishanka ARTE, 4, quai du Chanoine Winterer (oo u dhow degmada Yurub). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
B-line tramway terminus ee Hoenheim (conurbation waqooyiga). Waxaa dhistay 2001 naqshada casriga casriga ah Zaha Hadid. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Republic Square. Waddo isgoys ah oo ku wareegsan dhismayaasha dadweynaha ee neoclassical. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Farshaxanka Casriga iyo Casriga (Musée d'Art Moderne et Contemporain). Waxaa sidoo kale lagu talinayaa sababtoo ah dhismaha xiisaha leh. . 10. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka taariikhiga ah. Matxafka taariikhda Strasbourg. .6.5 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Soolka. Mo-Fr 10:00-18:00. €8. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka qadiimiga ah. .6.5 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Farshaxanka Qurxinta. .6.5 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Farshaxanka. .6.5 XNUMX. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Tomi Ungerer. 10:00-18:00; Tu off. €6.5. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Muuqaalka hawada ee Rhine, oo muujinaya Passerelle des Deux Rives oo ka tallaabaya wabiga Strasbourg una sii jeeda dhinaca Jarmalka ee Kehl
Suuqyada Kirismaska waxaa laga heli karaa meelo badan, laakiin kuwa ugu muhiimsan uguna quruxda badan waa meesha Broglie iyo place de la Cathédrale, in kasta oo ay dad badan yihiin. Waa meelaha ugu wanaagsan ee lagu cabo khamri kulul (vin chaud) iyo in la cuno buskudyada kirismaska ​​(Brädeles).
Xitaa marka aysan dhacdooyin gaar ah ka jirin Strasbourg, socodka magaalada hore waa hab aad u wanaagsan oo maalin la maro. Waxaana jira makhaayado badan oo wanaagsan oo lagu istaago oo lagu nasto markii aad socdaalka ku jirto.
Safarada doomaha oo ay weheliyaan Rhine waxay bixiyaan aragtiyo labadaba Strasbourg iyo Jarmalka deriska ah. Batorama waxay bixisaa dhowr dalxiis oo webi ah oo soconaya illaa 45 daqiiqo illaa saacado yar, qiimihiisuna waa around 10 qofkiiba. 45 daqiiqo oo safarro ah ayaa ku wareegaya bartamaha magaalada iyo xaafadda Yurub. Doomaha waxaa laga heli karaa hoosta Place du Marché aux Poissons.
Waqti ka waqti, magaaladu waxay abaabushaa suuq guud oo ku yaal qaybo ballaadhan oo ka mid ah xarunta, halkaas oo iibiyeyaal badan oo waddooyinka ah ay bixiyaan alaabooyin kala duwan oo dukaammaduna ay ku soo biiraan qiimo dhimis gaar ah. Kadib, bartamaha magaalada ee jasiiradda qayb ahaan waa la xiray baarkin ama baabur wadid taraamyada ayaan ku socon ilaa meesha loo maro rue des Francs Bourgeois. Macluumaadka ku saabsan taariikhaha caadiga ah ee suuqa way adag tahay in laga helo shabakadda. Haddii aad maamusho inaad raad raacdo taariikhda suuqan, halkan ku qor oo ha moogaan.
Marché aux Puces (suuqa flea), rue de Vieil-Hôpital. W iyo Sa. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Dhig des Halles, 24, meel des Halles. Isniin-Jimce 09:00 - 20:00, iyo Sabti ilaa 20:00. Xarun laga dukaameysto oo leh in ka badan 100 dukaanno iyo makhaayado ku yaal woqooyiga magaalada, laakiin u jirta masaafo lug ah. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Xarunta wax iibsiga ee Rivetoile, Place d'etoile (inta udhaxeysa Etoile Polygone iyo Etoile Bourse tram istaaga). Horumarkan cusub wuxuu leeyahay dukaamo la mid ah Place des Halles iyo sidoo kale dukaamo miisaaniyadeed oo sareeya iyo maqaaxiyo badan oo la xushay. (cusbooneysiiyay Sep 2010)
Isku day Galeries Lafayettes at rue du 22 Novembre iyo Printemps at 1-5 rue de la Haute Montée. Rue Hellebardes iyo Gutenberg sii dhar naqshadeeye iyo dharka ragga. Bruno Saint Hilaire waxay leedahay dhar nashqadeeyaha ragga iyo dukaan ku yaal 8, rue Gutenberg. Waxaa jira miisaaniyad yar, dukaan dharka lagu iibiyo oo ku yaal 6, rue de la Lanterne, iyo dukaamo gadget oo kala duwan ayaa laga heli karaa rue des Juifs.
Alaabada raqiiska ah, oo ay ku jiraan khamriga maxalliga ah iyo khamriga, isku day mid ka mid ah saddex xarumood oo NORMA ah, silsilad qiimo dhimis Jarmal ah oo seddex xarumood ay si habboon ugu yaalliin geeska rue St Michel iyo rue Ste Marguerite oo u dhow xarunta tareenka dhexe; at 79, Grand'Rue oo udhow bartamaha Grand Île; iyo markay tahay 27, rue des Frères agagaarka Katidralka. Wuxuu furan yahay Isniinta ilaa Jimcaha 10 AM-8PM, Sa 9:30 AM-7PM.
Hoteelka Adagio Access Strasbourg Illkirch
Hoteelka Adagio Access Strasbourg Petite France
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican De France Strasbourg
Hoteelka Galbeedka ugu Fiican De L'Europe Strasbourg
Metropole Galbeedka Monopole ugu Fiican
Hoteelka Bristol Strasbourg
Cap Europe Deganaanshaha Strasbourg
Cerise Strasbourg Deganaansho
Huteelka Citadines Kleber Strasbourg
Raaxo Huteel Strasbourg
Raaxo Huteel Strasbourg Athena Spa
Cour Du Corbeau Hotel Strasbourg - Ururinta MGallery
Hoteelka Esplanade Strasbourg
Xarunta Hoteelka Strasbourg
Hoteelka Chateau D'Andlau Barr
Hoteelka L'Ours De Mutzig
Huteelka 'Mercure Gare Centrale Hotel' Strasbourg
Xarunta Mercure Strasbourg
Huteelka Mercure Strasbourg Palais Des Congres
Huteelka 'Mercure Sud Hotel' Strasbourg
Hoteelka Novotel Hotel Strasbourg Halles
Degenaanshaha Lagrange City Strasbourg
Hoteelka Villa d'Est ee Strasbourg
eHalal Safarka Mart > Socdaalka Faransiiska Xalaal > Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Strasbourg